Isinyithi sentsimbi umbhobho & ityhubhu abavelisi - China intsimbi esentsimbi umbhobho & ityhubhu abaxhasi kunye nefektri
Umbhobho oMnyama weSinyithi wefanitshala
Umbhobho omnyama wesikwere omnyama uqengqwe ngumtya wentsimbi emva konyango lwetekhnoloji. Ngokubanzi, umtya wentsimbi uyatyhilwa, ucandwe, ujijwe kwaye udityaniswe ukwenza ityhubhu yentsimbi ejikelezileyo, ethi isongwe ngetyhubhu yentsimbi yesikwere ize isikwe kubude obufunekayo.
Isefu yesinyithi sentsimbi kumbhobho wolwakhiwo lolwakhiwo
Isefu isikwere umbhobho liqengqiwe ngu umtya wentsimbi kwalenza emva konyango lwetekhnoloji. Ngokubanzi, umtya wentsimbi kwalenza uyothula, ulungelelaniswe, ujijiwe kwaye udityaniswe ukwenza ityhubhu ejikelezayo, ethi ke isongwe ngetyhubhu yesikwere emva koko isikwe kubude obufunekayo.
Q345B ERW ngeenxa zonke Pipe Steel Kuba Ecuador
I-ERW Pipe imele uMbane oMbane we-welding Pipe, ebonisa ukusebenza kakuhle kweendleko kunye nokunyamezelana okusondeleyo kodonga xa kuthelekiswa nombhobho wesinyithi ongenamthungo. Isetyenziswa ngokubanzi ekubiyeni, ekunikezelweni, kubunjineli, njl. Ukuqinisekisa ubungakanani obuphezulu kunye nomgangatho we-ERW Pipe, i-SMC yethu isebenzisa izinto ezifanelekileyo, kwaye inolawulo lomgangatho olungqongqo.
BS 1387 Hot nkxu Isefu Steel Pipe Round
Idiphu eshushu kwalenza kumbhobho ojikelezayo kukwenza intsimbi etyhidiweyo isabele ngesinyithi matrix ukuvelisa ingxubevange umaleko, ukuze ukudibanisa matrix kunye nokwaleka. Hot-dip galvanizing kukuba pickle umbhobho intsimbi kuqala. Ukuze kususwe i-iron oxide yentsimbi phezu kombhobho wentsimbi, emva kokukhethwa, umbhobho wensimbi ucoceka kwisisombululo esinamandla se-ammonium chloride okanye i-zinc chloride okanye isisombululo esixubileyo samanzi se-ammonium chloride kunye ne-zinc chloride, emva koko sithunyelwe kwindawo eshushu -ukuntywila itanki. Ukudibanisa okushushu kukudibanisa okufanayo, ukunamathela okunamandla kunye nobomi benkonzo ende. Ukuphendula okunzima komzimba kunye nokwenziwa kwemichiza kwenzeka phakathi kwe-substrate yombhobho oshushu oshushu oshushu kunye nesisombululo esinyibilikisiweyo, esenza umaleko onganyangekiyo umhlwa we-zinc-iron alloy ungqinelwano. Uluhlu lwengxubevange luhlanganiswe nocwecwe olusulungekileyo lwe-zinc kunye ne-matrix yentsimbi. Ke ngoko, inamandla okumelana nokubola
SSAW Spiral welding x42 Steel Pipe
Spiral welding ipayipi yenziwa ngokuqengqa umcu wentsimbi yentsimbi enobumba obucekeceke okanye i-alloy ephantsi yolwakhiwo lwentsimbi kumbhobho ongenanto ngokungqinelana ne-angle ethile ye-helix (ebizwa ngokuba yi-angle angle), emva koko iwelding amalungu ombhobho. Inokuvelisa imibhobho yentsimbi enobubanzi obukhulu kwimicu yentsimbi emxinwa.